इजरायल जान कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ ?
Mon, Dec 09, 2019 | 17:25:50 NST
11:23 AM (6 years ago)
प्रश्न : वैदेशिक रोजगारका लागि म इजरायल जान चाहन्छु । त्यहाँ जानका लागि के गर्नुपर्ला ? कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ ?
उत्तरः विनोद केसी, महानिर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग : इजरायल लगिदिन्छु भनेर कसैले रकम माग्छ भने तपाईं ठगिँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् । किनभने अहिले इजरायल सरकारले व्यवसायीबाट नभइ जसरी अहिले इपिएसबाट कोरिया मानिसहरु पठाइरहेको छ, त्यसरी नै जी टु जी प्रणालीबाट कामदार नेपालबाट इजरायल पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
केही समयपछि दुई सरकारबीच सहमति हुन्छ र त्यहि आधारमा पाइलट प्रोजेक्टमा कामदार इजरायल पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अहिले व्यवसायीबाट कामदार इजरायले पठाउने व्यवस्था छैन ।